Somaliland oo ka hadashey kulankii Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland uu hoggaaminayey iyo Madaxweynaha Dalka Kenya, Uhuru kenyatta. – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Somaliland oo ka hadashey kulankii Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland uu hoggaaminayey iyo Madaxweynaha...
Somaliland oo ka hadashey kulankii Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland uu hoggaaminayey iyo Madaxweynaha Dalka Kenya, Uhuru kenyatta.
Dowlada somaliland oo Warsaxafadeed kasoo saartey safarkii madaxweynaha somaliland ee muuse biixi ayaa waxaa uu u qornaa sidan
Kulan laba geesood ah oo dhex maray weftigii Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland uu hoggaaminayey iyo Madaxweynaha Dalka Kenya, Uhuru kenyatta.
Nairobi-14-12-2020-()-Madaxweynaha dalka Kenya mudane Uhuru kenyatta ayaa maanta aqalka madaxtooyada ee magaalada Nairobi ku marti-qaaday weftigii ka socday Jamhuuriyadda Somaliland ee uu hoggaaminayey madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi oo maalintii labaad ku sugan dalka Kenya.
Kulankaas oo ahaa mid laba geesood ah oo u dhaxeeyey Madaxweynaha Kenya iyo Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland oo ay weheliyaan weftigiisii booqashada ku joogay dalka Kenya, labada madaxweyne waxay kaga wada hadleen qodobo dhawr ah oo u badan danaha labada dal ee Kenya iyo Somaliland sidii loo xoojin lahaa.
Waxaana la isla meel dhigay in labada wafti ay iskugu yimaadaan kulan labaad maalinta berri oo Salaasa ah taariikhduna tahay 15-ka December 2020, si loo dhammaystiro qodobada labada Madaxweyne ka wada hadleen maanta.
Afhyeenka Madaxweynaha JSL
Previous articleKheyre oo la kulmey wasiirka arimaha dibada Ruushka
Next articleXOG , Muxuu Ra’isulwasaare Rooble usheegay Isimada Puntland
Guddiga u diyaargowga iyo ka hortaga xanuunka Koroona Fayras ee Somaliland...